Dhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan hoos ugu dhacay 2.5%, sida uu sheegay Bankiga Adduunka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDhaqaalaha Soomaaliya oo sanadkan hoos ugu dhacay 2.5%, sida uu sheegay Bankiga Adduunka
October 28, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Haween lacag ka sarifanaysa suuq. [Sawir Hore]
Washington-(Puntland Mirror) Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sanadkan hoos ugu dhacay 2.5%, sida maanta oo Arbaco ah uu sheegay Bankiga Adduunka, kaasoo dib u eegis ku sameeyay qiyaastiisii hore oo ahaa koboc 3.2% kadib saameyn uu keenay dhibbaatada xanuunka coronavirus.
Si ka duwan coronavirus, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa saameyn u geystay fatahaadaha daran ee sanadkan iyo duulaanka ayaxa.
Waxyaabaha kale oo khatarta ku ah dhaqaalaha dalka waxaa kamid ah khilaafyada siyaasadeed ee la xiriira doorashooyinka qaranka oo dhacaya sanadka soo socda, sida uu sheegay Bankiga Adduunka.
Dalka ayaa sidoo kale wajahaya weeraro kaga imaanaya kooxaha argagixisada, tayo xumada adeegyada caafimaadka kaasoo sii daahin kara xanuunka coronavirus, Bankiga Adduunka ayaa intaas ku daray.
April 14, 2020 32 kiis oo cusub oo coronavirus ah oo laga helay gudaha Muqdisho
May 14, 2019 IMF oo sheegtay in kobaca dhaqaalaha Soomaaliya uu kordhi karo 3% sanadka 2019
Nairobi-(Puntland Mirror) Weerarada ka dhanka ah samafalayaasha ka howlgala gudaha Soomaaliya ayaa korodhay sanadkan iyadoo qaarkood ay keeneen dilal, sida uu bayaan ku sheegay sargaal sare oo katirsan Qaramada Midoobay shalay oo Jimce ahayd. Isku [...]